Hairpins - 2012 ခုနှစ်,
လှပဆွဲဆောင်မှုကိုကြည့်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအဘယ်သူမျှမအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီစတိုင်လ်၏ဖန်တီးမှုတစ်ခု ပို. ပို. အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍဖက်ရှင် hairpins သတ်မှတ်။
ဒါဟာရာသီက၎င်း၏မတူကွဲပြားမှုနှင့်အတူ dazzles အပေါင်းတို့နှင့်အခါသမယအဘို့ထိုသူတို့နှင့်အတူဖန်စီ barrettes 2012 ပေးသင်အမြဲ, ကြော့စတိုင်နှင့်ကောင်းစွာ-သတို့သားကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဖက်ရှင် hairpins သာအလှဆင် - ညဦးယံ၌ဆံပင်အတွက်နေ့စဉ်ဆံပင်လှည့်, မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ဆံပင်၏အရောင်အလေးပေးဖို့အသံအတိုးအကျယ်ပေးပါ။
တံသင် 2012 မော်ဒယ်များ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ accessories များရွေးချယ်ရေးက၎င်း၏ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငွေပမာဏနှင့်အတူစိတျစှဲနိုင်အောင်ကြီးမားသည်။ ရာသီ၏ပစ္စုပ္ပန်လမ်းကြောင်းသစ်သားမွေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖက်ရှင်ဆံပင်ကလစ်ပ် 2012 ဖြစ်လာသည်။ အထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝသောသူတို့ rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်တစ်ဦးကြော့ရက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ကြည့်ရှုပါ။
ငါပြည့်စုံ updates များကိုစိတ်အားထက်သန် retro စတိုင်အပေါ်အမှတ်အသားစွန့်ခွာရန်ပျက်ကွက်ပါဘူး။ သူကဖြီးနဲ့တူနေရာလေးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာဖက်ရှင်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ သူတို့ကကျောက်ခဲတို့ကိုနှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အတူအလှဆင်နေကြပါတယ်။ ယခင်နှစ်ပေါင်း၏တူညီသောလမ်းကြောင်းသစ်သိမ်မွေ့လေးသို့မဟုတ်ပန်းပုံစံအလှဆင်တဲ့နိမ့်ဆုံးထားရှိနိုင်သည့် hoops ၏ပုံစံအတွက်ဆံပင်အဘို့အလက်ဝတ်ရတနာဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်နာများသတိပေးခံရ။ တစ်ဦးခမ်းနားလွမ်းသူ့ပန်းခွေတုပကော်လာ၏ပုံစံအတွက်အလွန်မူရင်းမိတ္တူ။
ယခုနှစ်တစ်ဦးကအမှန်တကယ်ထိခိုက်သူမ၏ဆံပင်ထဲမှာတစ်ခုထူးခြားဆန်းပြားပန်းပွင့်ခဲ့သည်။ ထိုတံသင်၏အဆင်းအရောင်မျိုးစုံ, မည်သည့်အသက်အရွယ်တစ်ခုလတ်ဆတ်နှင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့နူးညံ့ကြင်နာမှုအမြိုးသမီးမြားကိုပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာဂန္ဆနျ့ကငျြဘအတွက်အဆိုပါအရောင်ချွတ်ထားတဲ့ဆံပင်ရွှေရောင်ဆံညှပ်ပန်းပွင့်ဆံပင်အနက်ရောင်၌ကြီးသောကြည့်နဲ့ဆံပင်၏ဂုဏ်အသရေကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ အားလုံးအရိပ်လက္ခဏာအားဖြင့်, အပွင့်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ရင်ခုန်စရာဣတ္ဂုဏ်ရှိနေပါဦးမည်။
စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေကိုဖန်တီးယခု hairpins အသံအတိုးအကျယ်ကို အသုံးပြု. အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အနိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ကိရိယာ 60 ရဲ့ style အတွက်သူမ၏ဆံပင်ထားမိနစ်အနည်းငယ်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။ သင်ရုံ barrette အောက်ကို fix, ဆံပင်ထိပ်အပိုင်းခွဲထုတ်ပြီးအလင်းမွေးအောင်။ အထူးအံသွားကထွက်ကျစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အလွန်အထင်ကြီး hairpins လေးတို့သည်လည်း။ သူတို့ကအထည်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ဖဲကြိုး၏လုပ်နေကြသည်။ ငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များတို့အားဤသို့သောအထူးသင့်လျော်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပိုပြီးနူးညံ့လှပသောသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအောင်။
မမြင်ရတဲ့ - ဤရှင်းရှင်းတရားမျှတရန်အသုံးပြုသည့်အဟောင်းအမည်, ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ invisible အများဆုံးခေတ်သစ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကပန်းပွင့်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူအလှဆင်သည်လျှင်, သူကသေးငယ်တဲ့ hairpins အမျိုးမျိုးမှပူးတွဲပါသေးငယ်တဲ့ပန်းပွင့်ကနေဖန်တီးလှပတဲ့ပန်းပွင့်အိပ်ရာထဲသို့သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဟာဝိုင်ယီကနေကျွန်း၏အလှဆင်ဖို့အလွန်ဆင်တူသည်အရာ, ဦးခေါင်း၏ဘေးထွက် fix ။
ဆံပင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း 2012 တို့တွင်ပထမနေရာဂရိ hairpin ယူခဲ့ပါတယ်။ tracksuit မှညနပေိုငျးစားဆင်ယင်ထံမှမည်သည့်အဝတ်အစားနှင့်အတူဝတ်ဆင်နိုင်သည့်ဒါကပတ်တီး။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်များနှင့်ဒီဇိုင်းများဖြစ်နိုင်သည်, ကျယ်ပြန့်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့တောင်ရင်ထိုး, ပန်း rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အတူအလှဆင်သူတို့ရဲ့ဇာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ရှည်သောဆံပင်စီးသောအဘို့ကအကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်စတိုင်သတ္တုအနားကွပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကဆံပင်ကျော်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဦးခေါင်း၏ဗဟိုဖြတ်သန်းကြောင်းယင်း၏ strips တွေ complementing ပါဝင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုနေ့စဉ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်နှစ်ချက်ဘီးဝန်းဿုံထိုကဲ့သို့သောသားရေ, အထည်, ဇာနှင့်သတ္တုအဖြစ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများထား fit ။ ဆံပင်အနားကွပ်အောက်မှာထဲကပြေးထွက်လု, သငျသညျတံသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါဟာဆံပင်နူးညံ့မှုနှင့်ထူးခြားတဲ့ကျက်သရေကိုငါပေးမည်။
ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်း 2012 ခုနှစ်ရာသီ၏အပူဆုံးကလစ်များ။ တစ်မူထူးခြားသော image ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုစင်စစ်သူတို့ကိုလူတို့တွင်သင်တို့ကိုလက်ျာဘက်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နှစ်သစ်ကူး 2016 ဘို့နောက်ပြီး
ဖက်ရှင်နွေဦး-နွေရာသီ 2013 hairstyles
ဖက်ရှင်လေး - နွေဦး-နွေရာသီ 2016
ကျောင်းကပွဲ 2015 တွင်ဆင်မြန်း၏စတိုင်များ
Ugg ဘွတ်ဖိနပ် - ဆောင်းရာသီ 2016-2017
ဖက်ရှင် chiffon အင်္ကျီ 2014
ထုပ် - နွေဦးကို 2014 ခုနှစ်
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ 2013 ခုနှစ်နွေရာသီဘောင်းဘီတို
အနက်ရောင် walnut ၏ Tincture
Oksana Mukha - ကျောင်းကပွဲဆင်မြန်း 2014
Celandine ကူညီပေးသည်သောအရာကို မှစ. ?
အခန်းပေါင်းများအတွက် Glass ကို partitions ကို
နီကိုးလ် Kidman ၏တစ်ဦးကအံ့မခန်းပုံရိပ်နှင့် trolls: "အော်စကာ 2018" အတွက် Sandra Bullock
သွားန်းကျင်ရောင်သွားဖုံး - ဘာလုပ်သနည်း
စက်ယန္တရားများနှင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထား - cunnilingus လုပ်ဖို့ဘယ်လို